Haaf9 | Mobile App | Meelaha Dhaca - Kiis daraasad - NewGenApps - DeepTech, FinTech, Blockchain, Cloud, Mobile, Falanqaynta
Xaaladda Daraasadda: Hap9
Hap9 waa codsi si caqli gal ah loo qaabeeyey kaas oo u oggolaanaya isticmaaleyaasheeda inay eegaan dhammaan meelaha xiisaha leh ee ku xeeran magaalada iyagoo kaashanaya xallinta qulqulka fiidiyowga ku saleysan khariidadda. Appku wuxuu muujinayaa wax kasta oo laga soo bilaabo dib u eegista, sawirada, quudinta fiidyowga ilaa xitaa menu-yada meel gaar ah taas oo si weyn u yaraynaysa wakhtiga iyo tamarta si loo baadho noocyo kala duwan websites dib u eegista kaliya si loo helo meesha meydka ah. Hap9 aad bay u fududahay in wax laga qabto oo waxay u baahan tahay saxiix ama calaamad si aad u bilowdo raadinta meel kuu dhow. Fiidiyowga fiidiyooga ah ee naadiyada si joogto ah ayaa loo cusbooneysiiyaa si aysan u dhicin isticmaalayaasha marka ay sahamiyaan meelaha u dhow. In ka badan ama ka yar sida Zomato, Hap9 wuu ka caqli badan yahay oo wuu ka farxad badan yahay abka kale ee dukaanka ku jira. Hap9, uma baahnid inaad darsin dad ah waydiiso talooyinkooda curyaanka ah oo aad jahawareerto, waxa laga yaabaa inaad hadda laftaadu iska hubiso meelaha aad rabto, wakhti kasta iyo meel kasta. Hap9 wuxuu la shaqeeyaa iOS iyo Android 4.1 iyo kor.
Xallinta dhibaatada muujinta khariidadda ee aalado yar, samaynta plugins aad u xoog badan, jilicsanaanta animations ee sawir qaade/ bog -mareen/ digsi khariidad/ zoom iwm, hagaajinta khaladka, way yaraayeen caqabadaha ee la wajahayay.
Barnaamijku wuxuu muujinayaa quudinta fiidiyowga ee naadiyada iyo meelaha sida ku cad meesha isticmaalaha sidoo kale wuxuu adeegsadaa AI.
Arag fiidiyowyada fiidiyow ee naadiyada waqtiga-dhabta ah - Barnaamijku wuxuu u oggolaanayaa adeegsadayaasheeda inay fiiriyaan quudinta fiidiyowga ee goobaha u dhow si ay aragti sax ah uga helaan goobta.
Iska ilow dhibka isku shaandhaynta ee kala duwan websites - Helitaanka wax kasta oo hal meel ah, xitaa liiska cuntada, waxay gooysaa wakhtiga isku-shaandhaynta aan loo baahnayn ee abka kale iyo websites.
Ogow kaliya xaqiiqooyinka saxda ah ka hor intaadan aadin meel - Hap9 waxaa loo qaabeeyey qaab markii qof adeegsade soo galo, meelaha ugu dhow lagu muujiyo khariidada sida ku cad goobta iyo faahfaahin kasta oo loo baahan yahay si toos ah ayaa loo muujiyaa.